Indlela yokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth-Geofumadas
NgoNovemba, 2007 AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, GIS asibonise, Microstation-Bentley
Kuyenzeka ukuba ukhuphele umfanekiso omnye okanye emininzi kwiGoogle Earth, ngendlela ye-mosaic. Ukwenza oku, kule meko siza kubona isicelo esibiziweyo I-Google Maps Images Downloader kwinguqu etshayiweyo.
1 Ukuchaza indawo
Kufanelekile ukwenza udibaniso AutoCAD okanye ArcGIS, ngoko exportes ukuba KML, kuba ikuvumela ukulawula ngcono ukuba wenze ukulanda ezinkulu.
2 Faka i parameters
Le nkqubo uyabakhokela iziphelo yonke ikota yesangqa ndawo ukuba asinamdla wokulanda na, oku kufuna 4 ufake idatha ngeshumi, kungekhona uqondisa UTM, besesithe ngaphambili indlela eqwalaselwe ngayo Imbono kuGoogle Earth. Inkqubo ikwanayo nesiguquli ukusuka kwiidigri / imizuzu ukuya kwiidesimali zokugqibela kwimenyu "yezixhobo"
Emva kokuba unikezele izilungelelaniso, kufuneka ungene kwi-zoom, yile nqanaba lokufikelela, elilingene nesilinganisi esikolweni esiphantsi kwe-Google Maps; indlela ephezulu yi-18x (kwi-shareware version kuphela 13x ivunyelwe)
Emva koko ufaka inani lokukhuphela kwimisonto (imicu), ubuninzi yi-64 kwaye ukhethe ifolda yendawo eya kuyo imifanekiso. Oku kuya kugcinwa kwifomathi ye-bmp, kunye nefayile yombhalo enegama leprojekthi equlathe iilungelelaniso zomfanekiso ngamnye.
3 Ukudibanisa imifanekiso yomfanekiso
Inkqubo inombukeli ukubona yonke imifanekiso ngakweli, uyakwenza oku ngokuvula iprojekthi "ifayile / projekthi evulekileyo"
Ukuzibandakanya kumfanekiso omnye uyenza nge «izixhobo / ukudibanisa imifanekiso», ukhetha iprojekthi kunye nendawo oya kuyo kwifayile. Le nkqubo inokusebenzisa izixhobo ezibonakalayo ukuba isixa semifanekiso sikhulu, ndicebisa ukuba wenze uvavanyo oluncinci ukuze ukwazi ukusebenza kwesixhobo sakho, kuba nangona inkumbulo yakho ye-ram iphezulu unganakho ucothise ngeenkqubo ezininzi ezifakiweyo okanye ezingakhange zibhengezwe ngokungafanelekanga.
4 Ukushicilela umfanekiso wesithunzi somanyano
Khumbula ukuba umfanekiso usefom .bmp ifomathi, ukuba i-georeference ndiyincoma ukuba ubone ukungena kwangaphambili apho ndathetha malunga nendlela yokwenza ngayo AutoCAD, Microstation y asibonise.
5 Ukuqapha okanye ukuqwalaselwa
Akucetyiswa ukwenza ukubanjiswa okukhulu, kuba iGoogle iyayithintela ipn yakho ngokufumana ukhuphelo ngokulandelelana kwiindawo ezisecaleni. Kwimeko yale nto inkqubo ikuxela yona, kuthatha iGoogle malunga neeyure ze-24 ukuphinda wenze i-ip evaliweyo nangona ungayitshintsha kwaye uqhubeke (ukuyitshintsha kufuneka uhambe uqhagamshelo kwenethiwekhi, cofa ekunxibelelaneni okusebenzayo, iipropathi, tcp / ip protocol , kwaye ulungiselele i-ip eyahlukileyo). Banokugcinwa njengeeprojekthi ngolwandiso lwe-.gmid, ukuze ukhuphelo lunokwenziwa ngokuyinxenye, ukumisa iseshoni kwaye uqhubeke emva kokuphumla.
Kwimeko apho unxibelelwano lwakho nommeli, kufuneka uyilungiselele kwiinketho ze «
Ilayisenisi yi-shareware, kwaye unokukhuphela kuphela kwi-13x, ilayisenisi ehlawulwa ixabise i-$ 25
Olu khuphelayo luyimifanekiso, awukwazi ukukhuphela iimephu okanye imifanekiso eqingqiweyo
Ukuba ufuna ukwazi indlela echanekileyo ngayo imifanekiso yeGoogle Earth ubalekele wena
Apha ungayilanda I-Google Maps Images Downloader
Yintoni, obani na obonwayo nayiphi na isicelo esenza into efanayo?
Post edlulileyo«Edlulileyo Guqula kusuka kwi-GoogleEarth ukuya kwi-AutoCAD, i-ArcView kunye nezinye iifom
Post Next Umqulu weMifanekiso kwiSpeyinOkulandelayo "
Iimpendulo ze-8 "Indlela yokulanda imifanekiso esuka kwiGoogle Earth"
Emva kwemini entle ungasebenzisa i-CAD-Earth, eneqonga le-autocad okanye yebriscad, ungenise umfanekiso ovela kuGoogle Hearth, kunye nemifanekiso evela kweminye imihla esele ikho geolocated
Ndivele ndizame isicelo kodwa ivelisa kuphela umfanekiso we-1 kwaye ingenanto. oko kwenzeka
Enye inkqubo eyenza oko yiPlexEarth
Esinye isixhobo esenza oku Plex.Earth
Oko kufuneka ukwenze ukuthumela ifayile kwi-kml, kwaye ngale ndlela uza kukwazi ukuyivula ngeGoogle Earth
Kungekudala ndifumene neli phepha elimangalisayo, apho ndiye ndakukhupha amanye amathandabuzo; kodwa ndingathanda ukwazi okungakumbi malunga nendlela yokungenisa imitha ukusuka kwi-autocad ukuya kwi-goart yeart.
Qaphela: inguqu ye-autocad apho ndisebenza khona: i-autocad 2007 kunye ne-Civil 3D 2008
Sawubona uAdrian, kukho kwakhona i-Stitchmaps, yenza umsebenzi ofanayo.
Kubi kakhulu indawo icinyiwe ... ingaba ikhona enye inkqubo yokwenza oku?